Aghụghọ iji wepu akwụkwọ ahụaja na mgbidi | Bezzia
Nke Torres | 16/10/2021 16:00 | Nri
Iwepu akwụkwọ ahụaja na mgbidi nwere ike ịdị mgbagwoju anya, ma ọ bụrụ na ịmaghị otu esi eme ya ma ọ bụ na ị maghị ụfọdụ aghụghọ kacha mma nke ndị ọkachamara n'ọhịa. Icha mma na akwụkwọ ahụaja dị mma, ị na -enweta ọkụ, omimi na ụdị pụrụ iche siri ike iji ihe ndị ọzọ nweta. Ma n'adịghị ka eserese, ọ dịghị mfe iwepu mgbe ịchọrọ ịgbanwe ọnọdụ.
Ihe niile eji achọ mma nke mgbidi na -emebi emebi. N'agbanyeghị ụdị mma ị họọrọ, n'agbanyeghị ole ị na -elekọta ụlọ gị, n'ikpeazụ, iji kwa ụbọchị, esemokwu, iru mmiri, okpomọkụ na ọtụtụ narị ọnọdụ agaghị ekwe omume na -akpata agba ma ọ bụ akwụkwọ ahụaja na -aka njọ. Site na ihe ụfọdụ, ị ga -agafere ọrụ nke iwepụ ihe iji nwee ike imeghari oghere.
1 Aghụghọ adịghị agha agha iji wepu akwụkwọ ahụaja
1.1 Otu esi akwadebe ngwaahịa eke iji wepu akwụkwọ ahụaja
Aghụghọ adịghị agha agha iji wepu akwụkwọ ahụaja
Ihe mbụ ị ga -achọ bụ nnukwu ntachi obi, nwee ohere akwadoro nke ọma yana ihe niile ị ga -achọ n'aka. Agbanyeghị na aghụghọ ndị a ọ ga -adịrị gị mfe iwepu akwụkwọ ahụaja, ọ ka bụ ọrụ ga -ewe gị obere oge, karịsịa ma ọ bụrụ na mpaghara a ga -ewepụ dị nnukwu. Ya mere, bido site na ịkwadebe oghere, debe arịa ụlọ niile wee kpuchie ndị enweghị ike wepu ya.
Nwee ihe niile dị gị mkpa, yikwasị uwe dị mma ma kwadebe ubube iji banye n'akụkụ elu nke mgbidi ahụ. Tupu ịmalite, ị ga -ewepụrịrị mkpụcha ọkụ, ma ọ bụrụ na ọ dị. Agbanyeghị, tupu ime nke a cheta ka ị bepụ ọkụ eletrik iji zere ihe ndapụta. Iji mechaa usoro ndị gara aga, tinye akwụkwọ n'ime oghere mgbanwe, tinye teepu mkpuchi ma kpuchie oghere ndị ahụ nke ọma.
Ugbu a, anyị nwere ike ịmalite ọrụ nke iwepu faịlụ akwụkwọ ahụaja nke mgbidi. Maka nke a ị ga -achọ ngwaahịa nke ị ga -eji mee ka ihe ahụ dị nro ma dọpụta ya ngwa ngwa. N'ahịa ị nwere ike ịchọta ihe dị iche iche ejikere, ụfọdụ na-etinye ya na diffuser na ndị ọzọ nwere rola, n'ọnọdụ abụọ ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Agbanyeghị, en n'ụlọ ị nwere ike ịkwadebe ngwaahịa eke onwe gị yana ọ dịkwa irè.
Otu esi akwadebe ngwaahịa eke iji wepu akwụkwọ ahụaja
Ngwakọta dị mfe ma dịkwa ọnụ ala, ebe ọ bụ naanị ị ga -agwakọta mmiri ọkụ na ncha efere. Ị ga -achọ sponge iji tinye ngwaahịa ahụ n'elu, nnukwu ogbo nke na -amịkọrọ nke ọma, ebe ọ dị mkpa ka mụọ akwụkwọ ahụ nke ọma iji wepụ ya na mgbidi. Jiri nlezianya mikpuo elu ya, hapụ ya ka ọ rụọ ọrụ opekata mpe nkeji iri na ise.
Mgbe ahụ, nyere onwe gị aka na spatula iji bulie akụkụ, site na ngwa a, ị nwekwara ike bulie akwụkwọ ahụaja ntakịrị. Ọ dị mkpa ịnwa ị nweta mpempe akwụkwọ ahụ ka o kwere mee, ebe ọ bụ na ọ bụrụ na ọ daa, ọ ga -abụ ihe na -agwụ ike iwepu ya kpamkpam. Ọ bụrụ na ị chọpụta na ọ na-ata ma na-esiwanye ike, were mmiri ọkụ na ngwa ncha ihe were mikpuo elu ya ọzọ.
Mgbe ị na -eji spatula, ị ga -enwerịrị ndidi wee rụọ ọrụ ntakịrị ntakịrị, kemgbe Mmiri ga -eme ka mgbidi ahụ dị nro nke ngwaahịa a ọ ga -adịkwa mfe imebi mmebi nke ị ga -emezizi tupu itinye agba ma ọ bụ akwụkwọ ọhụrụ ị họrọ. Ọ bụ ezie na ọgwụgwọ a dị oke irè, ọ na -ekwe omume mgbe niile na enwere iberibe ndị na -arapara ma sie ike iwepu.
N'ọnọdụ ndị ahụ, naanị ihe ị ga -eme bụ ịkwadebe ihe na -efesa ya na mmiri ọkụ na akwa nro. Tinye na mpaghara a ga -agwọ gị ma hapụ maka nkeji ole na ole, akwụkwọ ahụ ga -apụ ngwa ngwa. Ị nwedịrị ọgwụgwọ ọzọ pụrụ iche nke ụlọ maka ebe nrapado jụrụ ịjụ oyi, mmanya ọcha na -ehicha ọcha. Jiri ngwakọta mmiri na mmanya na mpaghara kacha eguzogide ma ị ga -ahụ ka ị ga -esi kpochapụ akwụkwọ ahụaja ochie gị iji jiri aka gị rụzigharịa ụlọ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Nri » Aghụghọ iji wepu akwụkwọ ahụaja na mgbidi